ဦးဗေလုဝရဲ့ ဇနီးပြောပြ ခဲ့ တဲ့ ဆေးရုံ ကပြန်ဆင်းလာခဲ့ေ ပမယ့် ပြန်ကောင်းမလာသေးတဲ့ ဦးဗေလုဝရဲ့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုတစ်ခု – Shwewiki.com
လူ ရွှင်တော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗေလုဝဟာ ဦးနှောက်သွေးခဲတဲ့ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံတက်ကုသနေရာကနေ သက်သာလာလို့ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ဆေးရုံက ဆင်းလာလာချင်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ လယ်သူမ ထမင်းဆိုင်ကိုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသေးတယ်…ဒါကြောင့် ဗေလုဝတစ်ယောက်အမြန်ရောဂါပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေက ခုလိုကျန်းမာလာတာကြောင့် ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်…
ဒါေ ပမဲ့ ဗေလုဝဟာ ဆေးရုံက ဆင်းလာပြီဖြစ်သော်လည်း ပြန်ကောင်းမလာသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကို ဇနီးဖြစ်သူက ပြောပြသွားတာကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တွေ့ရှိရပါတယ်…
အဲတာကတော့ ဗေလုဝဟာ အာရုံကြောသွေးယိုခဲ့ပြီး စကားပြောတဲ့ အပိုင်းကို ထိသွားတာကြောင့် စကားပြောဖို့ ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်….ဒါကြောင့် စာပေဟောပြောပွဲတွေကို လွှတ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်…..
စကားပြောနိုင်ဖို့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ပြသသွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်… ဒါ့အပြင် အကုန်လုံးကို မှတ်မိနေပြီဖြစ်ပြီး သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ လာရင်ငိုကာ စကားကတော့ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖုန်းဆက်တဲ့အခါကျရင် တစ်ခွန်း နှစ်ခွန်း ပြောတယ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်…ဗေလုဝအတွက် စိတ်ပူပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူက ဆိုထားပါတယ်….
ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဦးဗေလုဝတစ်ယောက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေ အမြန်ဆုံးကောင်းမွန်လာပါစေလို့ ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်…
လူ ရှငျတျော သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဗလေုဝဟာ ဦးနှောကျသှေးခဲတဲ့ဝဒေနာကွောငျ့ ဆေးရုံတကျကုသနရောကနေ သကျသာလာလို့ ဆေးရုံက ပွနျဆငျးလာခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ…ဆေးရုံက ဆငျးလာလာခငျြးမှာပဲ သူ့ရဲ့ လယျသူမ ထမငျးဆိုငျကိုလညျး သှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပါသေးတယျ…ဒါကွောငျ့ ဗလေုဝတဈယောကျအမွနျရောဂါပြောကျကငျးပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျတှကေ ခုလိုကနျြးမာလာတာကွောငျ့ ဝမျးသာခဲ့ရပါတယျ…
ဒါေ ပမဲ့ ဗလေုဝဟာ ဆေးရုံက ဆငျးလာပွီဖွဈသျောလညျး ပွနျကောငျးမလာသေးတဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတေဈခုကို ဇနီးဖွဈသူက ပွောပွသှားတာကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တှရှေိ့ရပါတယျ…
အဲတာကတော့ ဗလေုဝဟာ အာရုံကွောသှေးယိုခဲ့ပွီး စကားပွောတဲ့ အပိုငျးကို ထိသှားတာကွောငျ့ စကားပွောဖို့ ပွနျလကေ့ငျြ့ရမယျလို့ ဆိုပါတယျ….ဒါကွောငျ့ စာပဟေောပွောပှဲတှကေို လှတျဖို့ အဆငျမပွတေော့ဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ…..
စကားပွောနိုငျဖို့ အသံပိုငျးဆိုငျရာ ဆရာဝနျကွီးတှနေဲ့ ပွသသှားမယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ… ဒါ့အပွငျ အကုနျလုံးကို မှတျမိနပွေီဖွဈပွီး သူ့ သူငယျခငျြးတှေ လာရငျငိုကာ စကားကတော့ တဈခါတဈလေ သူ့ သူငယျခငျြးတှေ ဖုနျးဆကျတဲ့အခါကရြငျ တဈခှနျး နှဈခှနျး ပွောတယျလို့ ဇနီးဖွဈသူက ဆိုခဲ့ပါတယျ…ဗလေုဝအတှကျ စိတျပူပွီး ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွသူတှကေိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ဇနီးဖွဈသူက ဆိုထားပါတယျ….
ဒါကွောငျ့ ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဦးဗလေုဝတဈယောကျ အသံပိုငျးဆိုငျရာထိခိုကျမှုတှေ အမွနျဆုံးကောငျးမှနျလာပါစလေို့ ဆကျလကျဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော…